Yedu Nyaya - Shanghai Chigong Industrial Co, Ltd.
Yedu cheni fekitori yakatanga makore makumi matatu apfuura ichigadzira yakaderera giredhi simbi cheni yegungwa uye yekushongedza chinangwa, ichiri kuunganidza ruzivo, vashandi & tekinoroji nezvetani yezvinhu, cheni kutungidza, cheni kupisa-kurapa & cheni kunyorera mumaindasitiri akasiyana siyana. Chain mamakisi aifukidza Giredhi 30, Giredhi 43 uye kusvika kuGrade 70. Izvi zvainyanya kukonzerwa ipapo Chinese simbi chigayo kugona kusakwana kwekusimudza yakakwira simba alloy simbi, asi nekabhoni simbi chete yeketani inogadzira indasitiri.
Maketani edu ekugadzira michina ipapo aive echinyorwa, uye kupisa-kupisa tekinoroji yakanga ichiri kubata kumusoro.
Kunyange zvakadaro, kutsunga kwedu uye kushuvira kwekutenderedza simbi yekubatanidza ngetani kugadzira kwakatibatsira isu nekubudirira mukuita mumakore iwayo:
Hunhu Kutanga kubva pazuva 1 yefekitori yedu iripo. Isu tinoziva chaizvo kuti ngetani yacho yakasimba seye isina kusimba chinongedzo, saka kuti iite yega yega yekubatanidza mhando imwe yakagara makore makumi matatu kusvika zvino.
Zvishandiso zvekudyara zvakaverengera pamusoro pe50% fekitori mambure purofiti kwemakore
Kushanda nemayunivhesiti uye maInstitute pamawelding, kupisa-kurapwa & kuyedzwa kwecheni kune yepamusoro mhando.
Ramba uchidzidza nezve epamba & ekunze misika zvinoda maererano neketani mamodheru, mamakisi, kunyorera, R&D, vakwikwidzi kupa, nezvimwe.
Kana uchishanyira fekitori yedu yemaketani nhasi, ndeye yemusangano yemazuva ano yakashongedzwa neazvino izere auto robhoti cheni yekugadzira muchina, yekumhanyisa kudzimisa & tempering yekupisa-yekurapa, auto cheni kureba kunetsekana bvunzo michina, seti yakakwana yeketani yekubatanidza & zvivakwa zvekuyedza zvinhu.
Kutenda kuChina michina yekuvandudza mainjiniya, pamwe neChina simbi zvigayo R&D yeakakwira chiwanikwa simbi zvinhu (MnNiCrMo), isu takanyatso kusimbisa zvigadzirwa zvedu renji parizvino neramangwana, kureva, mhando uye yakakwirira simba kutenderera simbi yekubatanidza ngetani e:
Marasha / kuchera kuchera & kuendesa system (ngetani paDIN22252, saizi inosvika ku42mm dia.), Kusanganisira Armored Face Conveyors (AFC), Beam Stage Loader (BSL), nzira yemusoro musoro muchina, nezvimwe.
Kusimudza & slinging application (ngetani dzeGrade 80 & Giredhi 100, saizi inosvika ku50mm dia.),
Kumwe kunetsa kunyorera kunosanganisira maeleti emabhaketi uye ngetani dzekuredza (paDIN 764 & DIN 766, saizi inosvika 60mm dia.).
Yedu makore makumi matatu nhoroondo yekutenderera simbi yekubatanidza cheni kugadzira haisati iri kure kubva pakutanga, uye isu tine zvakawanda zvekudzidza, kugadzira uye kugadzira …… isu tinoona nzira yedu yeramangwana isingagumi cheni tambo ine yega link kuti ive yechishuwo uye kupokana, uye isu takatsunga kuitora uye kufamba pamusoro.
Kuchengetedza yakakwira yemhando yepamusoro kudzora system;
Kuchengeta yakasimwa investimenti mumatekinoroji & zvishandiso zvemidziyo;
Kuti uwedzere uye uwedzere saizi yeketani & giredhi renji kuti usangane nezvinodiwa mumusika zvatova ipapo, incl, Giredhi 120 kutenderera kubatana macheni.
Kugovera nevatengi vedu, vashandi & nesosaiti zvakanyanya kupfuura zvinongedzo zvemaketani, kureva, hutano, chengetedzo, mhuri, simba rakachena, hupenyu hwakasvibira…
SCIC Vision & Basa
Hupfumi hwepasi rose hwave munguva nyowani izere nemasangano eCloud, AI, E-commerce, maDigits, 5G, Hupenyu hweSainzi, nezvimwe… maindasitiri echinyakare anosanganisira anogadzira maketeni achiri kuita sedombo repakona rekushandira vanhu vazhinji kurarama zvirinani; uye zve izvi, isu ticharamba tichitamba yedu yakakosha asi yekusingaperi basa nerukudzo uye kutsunga.
Kuunganidza vaneshungu uye nyanzvi timu,
Kuendesa matekinoroji ehunyanzvi uye manejimendi,
Kugadzira cheni yega yega yekubatanidza yakakura uye yakasimba.